I-Semalt: Indlela Yokuqhafaza Ikhasi Lewebhu Ukusebenzisa isandiso se-Google Chrome
Isikrini sesikrini sisho amasayithi futhi sichitha ulwazi oluwusizo oluvela kuwebhu. Ukukhipha isikrini yisisombululo esiphezulu sokuthola idatha yangempela kusuka kumawebhusayithi namakhasi wewebhu ku-Microsoft Excel. I-Google Chrome Extension Scraper iyinhlangano enamandla yokuhlunga isikrini esebenza kokubili iWindows ne-Mac OS.
Kungani i-Google Chrome Extension Scraper?
isandiso se-Google Chrome isilawuli esinamandla sokuhlunga isikrini esiya mahhala ku-Chrome Web Store. Ithuluzi lokulahla lifakwe kusiphequluli se-Chrome njenge-plugin. I-plugin ivumela abablogi nabathengisi ukuthola idatha kusuka kumakhasi wewebhu ngokuchofoza ngakwesokudla ku-element. '' I-Scrape Similar '' kufanele ivule esikrinini sakho uma uchofoza ngakwesokudla into.
i-XPath ulimi lohlelo olusetshenziselwa ukuthola ulwazi olubaluleke kakhulu ezakhiweni ze-XML. Ifayela le-HTML yisibonelo esihle kakhulu sesakhiwo se-XML. I-XPath isetshenziselwa ukukhetha izinombolo ezihlosiwe. Kulo mongo, i-XPath izosetshenziselwa ukunquma umbhalo ozokhishwa ekhasini lewebhu. I-XPath izosiza futhi ukukhomba amagama weqembu kanye nezinombolo zocingo zamaPhalamende aseSweden.
Usebenzisa i-Google Chrome's scraper ukufinyelela imininingwane yekheli lama-MPs angu-349 aseSweden
ane-Scraper ye-Chrome, ukususa ulwazi kusuka kukhasi lewebhu akuyona nje elula kodwa futhi kumnandi. Uzokujabulela inqubo kanye nenqubo ngokwayo.
Lewebhusayithi ichaza wonke amalungu eSweden namakheli abo. Ukuze uqalise, chofoza ngakwesokudla kunoma yiliphi i-MP bese ukhetha "I-Scrape efanayo. "Kufanele ubone ukubonisa okulandelayo esikrinini sakho.
Umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo sendlela yokukhipha ikhasi lewebhu lewebhu
Uma uchofoza ngakwesokudla ku-MP eyodwa bese ukhetha "Hlola isici," uhlu lwamagama alfabhethi luzokwenziwa ngaphansi kwe- "grid_6 i-alpha omega search results clist "class. Izinyathelo ezimbili zizosetshenziselwa ukukhipha leli khasi lewebhu. Isinyathelo esisodwa sizobandakanya ukhethe amathegi ahlanganisa idatha yamaPhalamende nge-XPath. Isinyathelo sesibili sizobandakanya ukukhetha izingxenye ezithile zedatha ezifana namagama weqembu, amagama, nenombolo yocingo futhi uhlele idatha kumakholomu.
Gweba ngokujulile kwisakhiwo se-HTML futhi ugcine izakhi zingaguquki. Khomba amathegi ukukhomba inombolo yamathegi ehambisana nezakhi esakhiweni sakho. Thola itekisi yokugcina ehlanganisa idatha ehlosiwe. Qalisa ukuhlola kwe-XPath kwisakhiwo ngokuchofoza i- "Scrape. "
Uhlu oluhlanganisa imigqa engu-349 luzoboniswa esikrinini sakho. 349 imelela inani eliphelele lamaPhalamende aseSweden.
Hlukanisa idatha ethunyelwe kumakholomu. Hlola ikhodi ye-HTML ekhasini lewebhu oyisebenzisayo. Kulesi simo, izingcezu okufanele zikhishwe zile mzuzu zigqamile. Faka i-XPath emkhakheni wekholomu wadala bese uchofoza okuthi "Scrape" ukuze usebenzise i-plugin.
Uma unolwazi oluyisisekelo lwe-XPath, uhlelo lokuqonda ngeke lube ngumsebenzi obaluleke kakhulu kuwe. Izinyathelo eziqanjwe ngenhla zikuqondisa ukuthi ungayihlola kanjani ikhasi lewebhu le-scrape. Uma usebenza ekukheni amakhasi amaningi ewebhu, udinga ukuba namakhono okuhlela Source .